Fampiharana ho an'ny iPhone | IPhone News (Pejy 9)
Lany amin'ny LinkedIn ny mpisera rosiana
Ny rafi-pitantanana fifandraisana ao Russia dia nanakana ny fidiran'ny mpampiasa avy ao amin'io firenena io mankany ...
Firefox Focus, ilay mpitety tranonkala izay mifantoka amin'ny fiainana manokana
Firefox no tranokala vaovao avy amin'ny fototr'i Mozilla, izay mifantoka amin'ny fiarovana ny fiainantsika manokana rehefa mizaha.
Siri dia mety misy amin'ny alàlan'ny chat iMessage, araka ity patanty ity
Amin'izao fotoana izao dia tsy afaka mangataka na inona na inona amin'i Siri isika amin'ny alàlan'ny fanoratana aminy, fa mety hiova izany araky ny patanty Apple farany.
Ny workflow dia havaozina amin'ny alàlan'ny fampidirana ny galerin'ny Workflows efa nandrasana hatry ny ela
Ireo tovolahy ao amin'ny Workflow dia manavao ny fampiharana amin'ny alàlan'ny fampidirana galeriam-piaramanidina izay ilaina tokoa raha ampiana nefa tsy mila mampiasa programa.
Football Manager Mobile 2017: niverina ny mpanjakan'ny mpitantana
SEGA dia manao izany indray ary manome antsika Football Manager Mobile 2017 mpitantana baolina kitra miavaka izay mifanaraka amin'ny andrasana
GoEuro dia manampy endri-javatra vaovao ary anisan'ireo fampiharana fitsangatsanganana tsara indrindra amin'ny taona
Ny rindrambaiko GoEuro dia nanao fanovana mahaliana sasany ary nalahady ho isan'ny fampiharana fitsangatsanganana tsara indrindra tamin'ny taona tao amin'ny App Store.
Tayasui Sketches Pro, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Tayasui Sketches Pro dia rindrambaiko ahafahantsika manamboatra sary amin'ny iPhone na iPad, na dia tsara kokoa amin'ny takelaka Apple aza
Google Translate dia nohavaozina mba ho marina kokoa
Google Translate dia namoaka algorithm vaovao hanamboarana fomban-drazana misy dikany bebe kokoa noho ny hatramin'izao.
Toca Hair Salon, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny lalao asehonay anao anio dia natao ho an'ny kely indrindra amin'ny trano ary novolavolain'i Toca Boca AB: Toca Hair Salon
Ny fampiharana ofisialy Reddit dia nohavaozina ary misy ny fanohanan'ny iPad ofisialy
Raha mpampiasa Reddit ianao dia mety tsy nahita fampiharana ofisialy miaraka amin'ny fanohanan'ny iPad. Raha izany dia mahaliana anao ny fanavaozana anao farany.
Google nandefa PhotoScan
Tapa-kevitra i Google fa hampiasa ny tolotra Google Photos ataon'izy ireo izahay. Mba hahatratrarana azy, na farafaharatsiny mametraka dingana iray hafa ...
Todoist dia nohavaozina amin'ny alàlan'ny fampidirana faharanitan-tsaina artifisialy
Ny faharanitan-tsaina dia tonga ao amin'ny Todoist, hanampy antsika hitantana ny asa isan'andro.
Ny Twitter izao dia mamela anao hangina ny bitsika, ny hastag ary ny emoji miaraka amin'ilay fanavaozana vaovao
Ny orinasam-bilaogy bitika bitika Twitter dia nanangana endrika vaovao izay tadiaviny hitazona ireo troll tsy ho ao anaty tambajotra.
Apple dia nanala fampiharana efa ho 50.000 XNUMX tao amin'ny App Store tamin'ny volana oktobra fotsiny
Nanomboka nanadio ny rindrambaiko i Apple ary tao anatin'ny iray volana dia nanala fampiharana efa ho 50.000 tao amin'ny App Store izy, ary vao fanombohana ihany io.
Efa manana daty ofisialy amin'ny fahatongavan'ny Super Mario Run ao amin'ny App Store izahay
Manantena ny hilalao ny lalao Mario Plumber voalohany amin'ny iOS ve ianao? Vaovao tsara, efa nambara hoe rahoviana no ho tonga ny Super Mario Run.
Ny AirPods manaraka dia afaka mandrefy pulsa, ny mari-pana ary ny hatsembohana
Ny taranaka faharoa an'ny earbuds tsy misy tariby an'ny Apple, ny AirPods 2 dia mety ahitana sensor biometrika, hoy ny patanty iray.
MarginNote Pro, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny rindranasa MarginNote Pro dia mety ho an'ireo mpampiasa rehetra izay mila manoratra naoty, fampiharana izay azontsika alaina maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra
Piano Tutor ho an'ny iPad maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra
Piano Tutor ho an'ny iPad dia fampiharana ho an'ireo olona rehetra maniry hianatra ny fototra amin'ny fitendrena piano.
eBay dia manavao ny fampiharana azy amin'ny fiantsenana Krismasy
Toy ny fanombohan'ny vanim-potoana fiantsenana krismasy dia nanapa-kevitra ny eBay hanavao ny fampiharana azy ...
Nataon'i WhatsApp ofisialy ho ofisialy io: ny antso an-tsary dia efa mahatratra ny mpampiasa rehetra
Tonga ny fotoana. WhatsApp dia efa nanambara fa ny antso an-tsary dia nanjary azon'ny mpampiasa iOS, Android ary Windows Phone rehetra.
Tadiavo ny biby fiompinao very ary ampio ny hafa amin'ny WIZAPET
WIZAPET, rindranasa fiaraha-miasa ahafahantsika mahita ny biby fiompinay very indray.
Ao amin'ny Actualidad iPhone dia hiezaka izahay hanamora ny fanaonareo amin'ireo rindranasa ireo hihena mora foana sy haingana, ny fihetsika no loha laharana.
Rindrambaiko hampiala sasatra sy hiala amin'ity tontolo ity (I)
Androany izahay mitondra anao ny tapany voalohany amin'ny safidy fampiharana fialantsasatra sy fisaintsainana izay hanampy anao hahomby kokoa ary hamoaka ny fihenjanana sy ny fihenjanana
The Adactive Adventures of Sherlock Holmes - Maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny adventures interactive an'ny Sherlock Holmes dia fampiharana maimaim-poana avelanay hankafizanao amin'ity faran'ny herinandro ity, raha azo atao, tsara kokoa amin'ny iPad.
Nintendo dia manavao ny app Miitomo miaraka amin'ny fanaingoana ny chat room
Ireo tovolahy avy amin'ny Nintendo dia manavao ny tambajotran-tserasera Miitomo mamela antsika hanao resaka manokana sy hanamboatra ny tontolon'ny Miis manontolo.
Ny lalao F1 2016 ofisialy dia misy ao amin'ny App Store ankehitriny
Ny lalao ofisialy F1 2016 dia tonga teo amin'ny App Store tamin'ny vidiny 9,99 euro nefa tsy nividy in-app.
Perchang, lalao fahaiza-manao sy piozila no lalao mandritra ny herinandro
Ny lalao nofidian'i Apple ho lalao mandritra ny herinandro dia Perchang, lalao fahaiza-manao mahafinaritra miaraka amin'ny vidiny mahazatra 1,99 euro.
ROME: Ady total izao azo alaina amin'ny iPad amin'ny € 9.99
Tianao ve ny lalao paikady? Ary faly ianao hahafantatra fa ny ROME: Total War dia azo alaina amin'ny iPad izao. Inona no andrasanao hihazonana azy io?
Ny Adobe Photoshop Express dia miombona amin'ny Google Photos
Ny fampiharana Photoshop Express dia nohavaozina nanampy fanampiana ho an'ny Google Photos
Paypal dia havaozina amin'ny iOS miaraka amin'ny mifanentana amin'i Siri
Ny serivisy fandoavam-bola an-tserasera PayPal dia namoaka kinova fanavaozana ny fampiharana ho an'ny iOS miaraka amin'ny vaovaon'ny ...
YouTurbo dia "Maimaimpoana", tetika iray mahatezitra ny mpiantsena
Ity karazana paikady ity dia tanterahina miaraka amin'ireo rindranasa izay fantatry ny mpamorona ny maharatsy azy, ary izany no nitranga tamin'ny YouTurbo.
Apple dia mandefa rindrambaiko fanohanana any Netherlands
Apple dia mandefa ny Apple Support any Netherlands, fampiharana fanampiana sy fanohanana izay manaraka ny tsipika momba ny tranokalan'ny fanampiana ary miaraka amin'ireo mpandraharaha manokana.
VITATube, maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra
VIATube dia rindrambaiko ahafahantsika milalao ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny horonantsary na horonantsary YouTube any aoriana.
Fampiharana hanapahana hira sy hanovana mozika
Androany izahay dia manome anao karazana rindrambaiko hanapaka hira sy hanova mozika mora avy amin'ny iPhone sy iPad anao
Ny fanavaozana WhatsApp manan-danja izao dia mamela antsika hikaroka GIF
Nahazo fanavaozana lehibe ny WhatsApp. Ankehitriny, ho fanampin'ny fanohanan'ny sary mihetsika dia mamela anao hikaroka GIF izao izy izao.
Maimaimpoana ny RadioApp mandritra ny fotoana voafetra
Betsaka ny terminal Android izay manohy manatratra ny tsena amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny radio tuner izay mamela ny mpampiasa ...
Facebook for iOS dia hanisy sivana toa an'i Prisma ho an'ny sary sy horonan-tsary
Fanavaozana Facebook tsy ho ela dia hamela ireo mpampiasa ny tambajotra sosialy hanisy sivana Prism amin'ny sariny sy ny lahatsarin'izy ireo.
Google Calendar ho an'ny iPhone dia manampy tohana Spotlight
Vao nahazo fanavaozana vaovao ny rindranasa Google Kalandrie, fanavaozana izay mahatonga azy hifanaraka amin'ny Spotlight, ilay motera fikarohana mitambatra ao amin'ny iOS
Apple News dia efa manana mpampiasa miavaka 70 tapitrisa
Ny sehatra vaovao Apple News, izay efa manana mpampiasa 70 tapitrisa, dia nanolotra doka amin'ny sehatra ho an'ny NBCUniversal
Monster Pinball HD, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny lalao maimaim-poana asehonay anao anio dia ny Monster Pinball HD, lalao iray izay, araka ny filazan'ny anarany tsara, dia mahatadidy ireo lalao Pinball mahazatra
Fampiharana tsara indrindra hianarana hitendry gitara
Te hianatra hitendry gitara ve ianao ary tsy fantatra hoe aiza no hanombohana? Manana telefaona finday ve ianao? Eto izahay dia hiresaka momba ny fampiharana marobe izay hahaliana anao.
Louder! manampy anao hifehy ny habetsaky ny AirPods anao
Rehefa nanambara voalohany ny earbuds tsy misy tariby AirPods vaovao ho an'ny iPhone 7 sy iPhone 7 Plus i Apple, dia voaray…
Ny Trail, mahatratra ny fiafaran'ny traikefa nahafinaritra amin'ity lalao mahafinaritra ity
Andao hiaraka aminay fa holazainay aminao ny momba ny The Trail, ny fahombiazana vaovao amin'ny iOS App Store, zava-miafina manaitaitra sary.
Tayasui Color azo maimaim-poana amin'ny fampiharana Apple Store
Mitady boky fandokoana amin'ny iPhone na iPad-nao? Ny fampiharana Apple Store dia manolotra ny fampiharana Tayasui Color maimaim-poana.
AirLaunch Pro, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny fampiharana AirLaunch Pro, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra, dia ahafahantsika mandefa rindranasa avy ao amin'ny Notification Center nefa tsy manokatra ny iPhone
Hoopa City avy amin'ny Dr. Panda, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Hoopy City dia lalao ho an'ny ankizy eo anelanelan'ny 6 sy 8 taona ho an'ny iOS, izay tsy maintsy hanorenan'izy ireo manomboka amin'ny tanàna kely ka hatrany amin'ny tanàna lehibe.
Asphalt Extreme, lalao video hainganana haingam-pandeha Gameloft
Asphalt Extreme, tamin'ity indray mitoraka ity dia niainga ho any ivelany, antsasaky ny rallye sy ny hadalana. Lazainay anao izay misy ny vaovao farany Gameloft.
Ahoana no fomba ahazoana fampandrenesana rehefa tonga amin'ny toerana iray ny namanao
Miaraka amin'ny iOS 10 dia azonay atao ny manafoana (fa tsy manafina) ireo rafi-pitaterana natsangan'i Apple ...
Very in Harmony no fampiharana amin'ny herinandro ao amin'ny STore App
Ny fampiharana amin'ny herinandro nofidian'i Apple dia Very in Harmony, lalao toa ny mpihazakazaka miaraka amina feon-kira mahafinaritra.
CalPrint ho an'ny iPhone, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny rindranasa maimaim-poana asehonay anao anio dia ny CalPrint ho an'ny iPhone, fampiharana iray ahafahantsika manonta ny tetiandro avy amin'ny iPhone.
Ny fanavaozana ny Twitter farany farany dia mampiseho ny Highlight, lazainay aminao izay misy azy
Ampahafantarinay anao ny vaovao farany momba ny fanavaozana farany ny fampiharana ofisialy Twitter, izay isongadin'ireo Asongadiny vaovao.
Ny mpamorona voaloboka dia mandefa ny HYPE, fampiharana handefasana horonantsary mivantana
Vantany vao nambara ny fanakatonana an'i Vine, nandefa fampiharana hafa antsoina hoe Hype ireo mpamorona azy hamela antsika handefa horonantsary mivantana.
Dropbox dia hanohana ny Split View afaka herinandro vitsivitsy
Ny serivisy fitehirizana rahona no filaharan'ny andro. Betsaka ny mpampiasa mampiasa ...
Asphalt Xtreme no lalao vaovao Gameloft ho an'ny iOS
Gameloft dia namoaka lalao vaovao: Asphalt Xtreme, lalao mety ho tsara raha toa ka tsy nahitana fividianana fampiharana na inona na inona.
1Password dia hifanaraka amin'ny Touch Bar sy Touch ID an'ny MacBook Pro vaovao
Ireo tovolahy avy amin'ny AgileBits dia nanambara fa ny fangatahana ho an'ny OS X dia hifanaraka amin'ny sensor amin'ny dian-tànan'ny MacBook Pro vaovao.
Apple nanitatra ny programa fividianana boky ho an'ny firenena vaovao 8
Ny programa fividianana volan'ny app an'ny Apple dia nivelatra tamin'ny firenena vaovao 8.
Instapaper dia manome maimaim-poana ny fiasa premium
Pinterest, tompon'ny Instapaper vaovao, dia nanala ireo fiasa maimaim-poana amin'ity fampiharana ity.
TigerBall no lalao lavorary handaniana ny fotoananao
Izy io dia manana lohahevitra tsotra tahaka ny mampiankin-doha, izay ampiana fa lalao maimaimpoana tanteraka izy io, tsy misy dokam-barotra na fandoavam-bola tafiditra
Ny Naked Case dia miaro ny iPhone 7 Jet Black anao nefa tsy manova ny endrik'izy ireo
Ny iPhone 7 Jet Black dia iray amin'ireo tsara tarehy indrindra navoaka hatramin'izao, saingy mety hijaly noho ny micro-abrasions. Ny fiarovana tsara indrindra dia antsoina hoe raharaha mitanjaka.
Ny fanavaozana ny WhatsApp dia mamaha ny olan'ny balaonina amin'ny fampiharana
Fanavaozana WhatsApp faharoa ao anatin'ny herinandro latsaka, ny farany manamboatra olana amin'ireo balaonina ao anaty fampiharana.
Ny fanavaozana farany ny Instagram dia mety hanala ny tahan'ny data-nao
Ny mpampiasa sasany miaraka amin'ny iOS 10.1 sy ny kinova farany an'ny fampiharana dia sendra olana lehibe amin'ny fampiasana angona finday.
PinOut! no lalao manetsika ny App Store, fantaro izany
PinOut!, Lalao mahafinaritra izay toa bebe kokoa amin'ny pin pin-ball manana lamina izay hanampy anao handany ny fotoana amin'ny hafainganam-pandeha mampiato fo.
Tsofina lavitra: Tsiambaratelon'ny rivotra afaka mandritra ny fotoana voafetra
Ny lalao asehonay anao anio dia Blown Away: Secret of the Wind, lalao iray izay azo sintonina maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Nohavaozina indray ny WhatsApp, mamela anao hizara GIF amin'ny fomba ofisialy. Ny fijanonana manaraka dia ny antso an-tsary!
Milasy miaraka amin'i Dadabe, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny filokana miaraka amin'i Dadabe dia lalao iray izay hianaran'ny ankizy kely ao an-trano mankafy fitsangatsanganana an-dasy avy amin'ny raibeny
Sonic CD, kilalao SEGA ho fampiharana mandritra ny herinandro
Amin'ity tranga ity, ny fampiharana ny herinandro dia Sonic CD, lalao iray tena mahaliana indrindra ho an'ireo mpampiasa nilalao ny Mega Drive.
Just Eat manatsara ny rafitry ny fikarohana ao amin'ny fanavaozana farany
Taorian'ny fanavaozana farany dia navaozina ny rafitra sivana Just Eat, ankehitriny dia afaka mahita mora kokoa ireo trano fisakafoanana tadiavintsika isika.
Ny lalao farany nataon'i Toca Boca dia antsoina hoe Toca Life: Farm ary efa azo alaina ao amin'ny App Store
Ny lalao vaovao avy amin'ny developer Toca Boca dia tonga teo amin'ny App Store, Toca Boca: Ny toeram-piompiana dia mametraka antsika amin'ny kiraron'ny tantsaha sasany
Maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra ny Blox 3D City Creator sy World Creator
THE GAMES Blox 3D City Creator and Blox 3D World dia azo sintonina maimaim-poana tanteraka amin'ny fotoana voafetra.
Fampiharana retouching sary
Fampiharana 7 hamerenana sary ireo sary izay tsy mety tsy hita ao amin'ny iPhone na iPad anao hanatsarana ny kalitaon'ny fakantsary anao ary hanaovany retouching mora foana
Fampiharana hamakiana boky amin'ny iPhone sy iPad
Ny fampiharana 7 tsara indrindra hamakiana boky amin'ny iPhone na iPad anao. Ianaro ny fomba ahafahanao mankafy ny e-boky na PDF amin'ny fitaovan'ny Apple
Apple dia hanohy hanao ny laharam-pahamehana ho an'ny fiainana manokana ny zava-miafina artificielle
Raha ny fahitana azy, Apple dia hanohy hanao ny tsiambaratelo ho iray amin'ireo teboka manandanja azy, na dia mampihena kely aza ny fahaizany mamorona.
Fampiasana Red Pro, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Red Utility Pro dia rindranasa iray izay, ankoatra ny fanolorana anay vaovao momba ny vidin'ny tahan'ny angon-drakitra, dia manolotra vaovao momba ny tamba-jotra izay ifandraisanay
Ny Duet Display dia nohavaozina miaraka amin'ny fanohanan'ny iPad Pro sy Apple Pencil
Nanavao ny fampiharana ny mpikaroka Duet Display mba hampifanaraka azy amin'ny Apple Pencil amin'ny iPad Pro.
Tadiavo na amidio amin'ny alàlan'ny fampiharana Autos.net ny fiaranao
Izahay dia mamakafaka ny fampiharana Autos.net hividy na hivarotra fiara vaovao sy fiara faharoa amin'ny iray amin'ireo tsena lehibe indrindra any Espana
Fanavaozana ny WhatsApp, fa tsy ilay andrasantsika
Faharetana kely kokoa: nohavaozina ny WhatsApp, saingy mbola hiandry kely kokoa vao afaka miantso video.
Google Maps dia nohavaozina miaraka amin'ny fanohanan'ny fandefasana trano
Ny fanavaozana farany ny Google Maps dia ahafahantsika mametraka baiko mivantana amin'ny rindranasa ao amin'ireo magazay mifanentana.
Midira amin'ny kiraron'i Pablo Escobar miaraka amin'i Narcos: Cartel Wars
Narcos: Cartel Wars, lalao video azo alaina ao amin'ny iOS App Store izay ahafahanao milentika tanteraka amin'ny kiraron'i Pablo Emilio Escobar Gaviria tenany
Zavamaniry vs. Zombies: Heroes, ity no lalao farany amin'ny saga
Manohy mitrandraka ny Zavamaniry vs. Zombies, ary tsy manome tsiny azy ireo izahay, matetika dia mahafinaritra ny valiny.
Ho tonga amin'ity herinandro ity ny antso an-tsarimihetsika WhatsApp
Te hiantso video amin'ny WhatsApp ve ianao? Toa efa tapitra ny fiandrasana: ny antso an-tsary dia efa navadika ho default amin'ny beta farany.
Hoso-doko, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny fampiharana maimaim-poana asehonay anao anio dia ny Paint Logue, fampiharana iray ahafahantsika mamorona loko rano amin'ny sarinay.
Fiainana Toca: Maimaim-poana ny tanàna mandritra ny fotoana voafetra
Ny lalao ho an'ny ankizy hankafizany amin'ity faran'ny herinandro ity amin'ny iPhone na iPad dia ny Toca Life: Town, lalao ho an'ny ankizy hatramin'ny dimy taona
Toca Boo, misy amin'ny fihenam-bidy lehibe
Ny developer Toca Boca dia manome antsika ny lalao Toca Boo miaraka amina fihenam-bidy lehibe mandritra ny fotoana voafetra.
AirServer dia mamela antsika hanao AirPlay amin'ny iOS sy Mac ka hatramin'ny Xbox
Ireo tovolahy ao amin'ny AirServer dia nanavao ny fampiharana manohana ny Xbox, ary koa ny Windows PC sy Mac
Night Sky 4, mijery ireo kintana miaraka amin'ny fampiharana amin'ny herinandro
Amin'ity tranga ity, ny fampiharana ny herinandro dia Night Sky 4, fampiharana karazana planeta izay ahafahantsika mianatra zavatra momba ny lanitra.
Ahoana ny fomba hanesorana ny namana rehetra amin'ny Game Center
Atorinay anao ny fomba azo atao mba hamafana ireo sakaiza rehetra ananantsika ao amin'ny Game Center
Chrome dia nohavaozina amin'ny fanatsarana ny fikarohana amin'ny feo
Ny fanavaozana farany an'i Chrome dia mitondra fiasa vaovao ho antsika izay nanjary safidy tsara indrindra amin'ny Safari ny browser
Gboard, ny kitendry Google izao dia mifanaraka amin'ny 3D Touch
Vao nohavaozina ny kitendry Google ary efa mifanaraka amin'ny teknolojia 3D Touch an'ny iPhone 6s sy iPhone 7.
Apple News izao dia manohana ny lahatsoratra HTML hanohanana atiny bebe kokoa
Apple News, fampiharana vaovao an'i Apple izay mbola tsy tonga tany Espana, dia manohy manatsara ary manohana lahatsoratra HTML ankehitriny.
Manomboka manolotra tantara mety mahaliana antsika ny Instagram
Instagram dia manohy manandrana mivarotra anay Instagram Stories amin'ny alàlan'ny fanolorana piraofilina mety hahaliana antsika amin'ny alàlan'ny tabilao Discover.
Minecraft: Story Mode maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny lalao maimaim-poana asehonay anao anio dia ny Minecraft: Story Edition, lalao iray izay ahitana ny voalohany amin'ireo fizarana 8 atolotray antsika ity lalao ity
Apple manova ny vidin'ny App Store any Afrika atsimo sy Nouvelle Zélande
Ireo mpampiasa ny vokatra Apple monina any Afrika atsimo sy Nouvelle Zélande dia hahita ao anatin'ny 72 ora manaraka ny fiovan'ny vidin'ny fampiharana sy lalao ao amin'ny App Store
InfoJobs, ilay rindranasa tadiavinao asa ary mihaino anao hanatsara hatrany
Raha mijery na mitady tolotra asa ianao, dia mety InfoJobs no ilainao. Ny fampahalalana rehetra momba ny tolotra asa amin'ny findainao.
Yum-Yum Nomera sy Tiggly Doctor maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra
Yum-Yum Nums sy Tiggly Doctor dia lalao roa ho an'ny ankizy kely ao an-trano izay azo alaina maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra
WarMen maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny lalao asehonay anao anio dia WarMen, lalao maneho ny toeran'izao tontolo izao misy gerilya an-tanàn-dehibe
Nikasa ny hamoaka lalao ho an'ny iOS ihany koa i Sony; mihoatra ny 5 amin'ny 2018
Ankehitriny rehefa mitondra ny toetrany ao amin'ny iOS i Nintendo, Sony dia nitatitra ihany koa fa hamoaka lalao ho an'ny iPhone, iPod Touch, ary iPad.
Ny fampiharana sary tsara indrindra ho an'ny iPhone 7 vaovao
Izahay dia manome anao safidin'izay heverinay fa ny fampiharana sary tsara indrindra izay tokony napetraka isaky ny iPhone.
Netflix dia hamela ny misintona alaina alohan'ny faran'ny taona
Ny serivisy horonantsary mivantana manerantany, Netflix, dia hanampy ny fahafaha misintona atiny ho an'ny fijerena ivelan'ny Internet
Avadiho ho sticker ny sary iMessage miaraka amin'i StickyPix
Miaraka amin'ny StickyPix azonao atao ny mamorona ny sticker-tsoratry ny hafatrao ao amin'ny iOS 10 avy amin'ny sarinao amin'ny fomba tsotra, haingana ary maimaimpoana tanteraka.
YouTurbo, Wheels Sambatra miaraka amin'ny lohahevitra «youtubera»
Ny hevitra farany nandresen'i ElRubiusOMG, YouTuber Espaniola malaza indrindra, dia ny YouTurbo, lalao manana lohahevitra tsotra.
Final Fantasy IV misy amin'ny fihenam-bidy lehibe ao amin'ny App Store
Final Fantasy IV dia azo sintonina mandritra ny fotoana voafetra amin'ny fihenam-bidy lehibe.
Fampiharana inona avy no azonao ampiasaina amin'ny Siri amin'ny iOS 10?
Hatramin'ny nanombohana tamin'ny fomba ofisialy ny iOS 10, ny mpanampy virtoaly Siri dia efa mifanaraka amin'ny fampiharana antoko fahatelo. Lazainay aminao hoe iza amin'ireo no azonao ampiasaina izao
Ny lalao Indy tsara indrindra amin'ny App Store misy fihenam-bidy lehibe
Mandritra ny fotoana voafetra, ny mpandraharaha mahaleo tena tsara indrindra dia manolotra ny lalao amin'ny fihenam-bidy 50% farafaharatsiny
Nohavaozina indray i Newton, toa manana olana amin'ny iOS 10
Toa taorian'ny fiovan'ny marika dia maka fotoana kely izy ireo mba hifanaraka amin'ireo zava-baovao ateraky ny rafitra miasa Apple vaovao.
Ny fanavaozana farany ny fampiharana Facebook dia ahafahantsika mandefa ireo horonantsary amin'ny Apple TV
Ny lahasa farany izay nalain'ny Facebook tamin'ny fifaninanana dia ahafahantsika mandefa ny horonan-tsarimihetsika amin'ny Apple TV
Apple mitsidika Nintendo amin'ny diany mankany Japon
Tamin'ny fitsidihana farany nataon'i Tim Cook tany Japon, ny lohan'ny Apple dia nanararaotra nitsidika ireo trano Nintendo ary nankafy ny Super Mario Run
ImgPlay - mpanao GIF miaraka amin'ny sary sy horonan-tsary maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Miresaka momba ny rindranasa iray azo alaina maimaimpoana izao indray izahay, fampiharana izay ...
Fanavaozana ny Google Photos amin'ny famoronana GIF avy amin'ny horonantsary ho azy
Ny fanavaozana farany an'i Google dia ahafahantsika mamorona GIF amin'ireo fotoana mahaliana indrindra ao anatin'ireo horonan-tsary, ankoatry ny fihodinana ireo sary nalaina avy teo amin'ny sisiny.
Fanavaozana Pokémon GO miaraka amina bonus bonus amin'ny fihazana sy gym
Ireo tovolahy tao Niantic dia manavao ny Pokémon GO hanome antsika bonus rehefa mihaza Pokémon ary manatsara ny fampiofanana ataonay amin'ny gym.
Ny Instagram dia havaozina miaraka amin'ny fampandrenesana mifandraika amin'ny iOS 10
Instagram dia nandefa fanavaozana vaovao izay misy fampandrenesana be dia be ho an'ny iOS 10. Lazainay aminao ny momba ny fahafaha-manolotra vaovao arosony.
Ny Dropbox dia nohavaozina manampy fanampiana ho an'ny PIP sy fiasa vaovao ho an'ny fampiharana Messages
Ny rindranasa Dropbox iOS dia nahazo fanavaozam-baovao vaovao nanampy ireo fiasa vaovao izay natolotry ny iOS 10 sy ny sasany amin'ny iOS 9
Malalaka ny Shadow Bug mandritra ny fotoana voafetra
Ao amin'ny Shadow Bug dia mametraka ny tenantsika amin'ny kiraron'ny ninja iray izay te hiverina hody izahay, saingy tsy maintsy esorintsika aloha ireo biby goavambe rehetra sendra azy eny an-dalana.
FIFA Mobile Soccer dia azo alaina ho an'ny iPhone sy iPad izao
FIFA Mobile Soccer dia lalao baolina kitra izay nohavaozina tanteraka mifandraika amin'ny lalao teo aloha, efa azo alaina amin'ny iPhone sy iPad izao.
Nandefa ny hetsika i Facebook, fampiharana vaovao ho an'ny kalandrie
Mihevitra ve ianao fa tsy ampy ny fampiharana kalandrie ao amin'ny App Store? Amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy manome toerana ho an'ny Event isika, tolo-kevitra iray avy amin'ny Facebook.
Nanazava i Apple ny antony nanesorany an'i Dash sy ny sisa amin'ireo fampiharana avy amin'ilay mpamorona iray ihany
Fotoana fohy taorian'ny fanesorana ireo rindrambaiko mpamorona Dash, Apple dia manazava ny antony nanapahany hevitra handray andraikitra.
Kalandrie widgety sy ny Forecast Bar maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra
Ny Widget amin'ny kalandrie sy ny fisotroana fisotroana dia widget roa ahafahantsika manamboatra ny foiben'ny fampandrenesana miaraka amin'ny toetr'andro sy ny kalandrie
Runtastic Mountain Bike Pro, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny developer Runtastic dia manolotra anay ny application Mountain Bike Pro maimaim-poana, izay azonay alaina mandritra ny fotoana voafetra nefa tsy mandoa euro.
iDoceo, ny namana tonga lafatra ho an'ny mpampianatra sy ny mpampianatra
iDoceo, fampiharana izay namboarina mba hanamora ny fiainana ho an'ny mpampianatra noho ny fahafaha-manaony.
Ahoana ny fomba fampidinana maimaim-poana ny INKS amin'ny app Apple Store
Misaotra ny fampiharana Apple Store, manome antsika ny application Pineal INKS ny orinasa monina ao Cupertino, izay vidiny amin'ny 1,99 euro
GTA San Andreas miaraka amina fihenam-bidy lehibe mandritra ny fotoana voafetra
GTA: San Andreas izao dia mitentina 2,99 € fotsiny mandritra ny fotoana voafetra, atorinay anao ny fomba fampidinana azy amin'ny iPhone sy iPad.
Miverina ny rindranasa Big Brother ofisialy hamenoana ny fandaharana tena izy
Jereo hoe amin'ny alàlan'ny fampiharana ofisialy Big Brother dia azonao atao ny manaraka ny zava-mitranga rehetra ao an-trano mivantana nefa tsy mila fahitalavitra
Mafia III: Rivals, no finday hafa amin'ny lalao console izay mahafinaritra
Mafia III: Tonga ny mpifanandrina anio ao amin'ny iOS App Store ihany koa ho an'ireo izay tsy afaka milalao amin'ny console. Ankafizo ity tantara mahafinaritra ity.
Làlana tsy mety vita, mizotra amin'ny lalana tsy azo tanterahina mandritra ny herinandro
Amin'ity indray mitoraka ity, ny fampiharana ny herinandro dia lalao antsoina hoe Impossible Road, izay tsy maintsy hifehezana baolina amin'ny làlana sarotra be.
Google Maps dia nohavaozina mba hanohanana ny iOS 10 vaovao
Ireo tovolahy ao amin'ny Google dia manavao ny Google Maps hanatsarana ny olan'ny Widgets app aorian'ny fahatongavan'ny iOS 10.
Magic Launcher Pro maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Magic Launcher Pro dia rindrambaiko ahafahantsika manamboatra ny Notification Center araka izay itiavantsika azy amin'ny fampidirana rohy mivantana amin'ireo rindranasa rehetra
Androany dia misokatra ao Naples ny ivon-toerana fampivoarana ny fampiharana iOS voalohany
Androany no andro voalohany nisokafan'ny iOS Application Development Center voalohany any Naples, Italia.
Isa sy Fanisam-bola, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny isa sy ny fanisana ary koa ny fanondroana ny anarana dia lalao ho an'ny kely indrindra amin'ny trano hanombohana mampifandray isa amin'ny zavatra
Inona no tsapan'izao tontolo izao? Mandraisa anjara amin'ny fanadihadiana lehibe indrindra momba ny fahasalamana ara-tsaina
Tetikasa iray mikendry ny hampiasa fampiharana iray hanatanterahana ny fandalinana lehibe indrindra eran-tany momba ny fahasalamana ara-tsaina mandritra ny herinandro
Ianao ve mitady mpiara-miasa na olona hiresahana zavatra tianao? Shakn dia rindranasa vaovao iray izay manome indray ity asa ity hiovaova indray.
Nandefa ny Marketplace ny Facebook, fomba vaovao hividianana sy hivarotana
Vao avy namoaka safidy ny Facebook izay ahafahan'ny mpampiasa mividy sy mivarotra zavatra amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy.
Apple manova ny toeran'ny Angela Ahrendts ao amin'ny tranonkalany
Na eo aza ny fanovana ny toeran'ny lohan'ny fivarotana an-tserasera sy ara-batana an'ny Apple, toa maneho ny zava-drehetra fa hijanona ho iray ihany i Angela Ahrendts
Adobe Lightroom dia efa manohana endrika RAW
Adobe Lightroom dia nohavaozina miaraka amin'ny fahafaha-maka sary amin'ny endrika RAW. Lazainay aminao ny vaovao momba ity fanavaozana ity.
FIFA 17 Companion, ny namana tonga lafatra ho an'ny Ultimate Team
Raha milalao FIFA 17 ianao dia aza adino ny maka ny FIFA 17 Companion, ilay mpiara-miasa tonga lafatra ho an'ny Ultimate Team, dia tonga any an-tampon'ny iPhone.
Mizarà fanentanana sy fifaliana amin'i Andriamatoa Wonderful
Andriamatoa Wonderful dia tonga tao amin'ny iOS App Store mba hahafahanao mizara ireo andiany manentana an'ity marika ity amin'ny namanao rehetra.
Fiainana Toca: Maimaimpoana ny sekoly mandritra ny fotoana voafetra
Tamin'ity faran'ny herinandro ity dia toa nifanaiky ny hanome ny lalao ho azy ireo maimaim-poana, ary anjaran'ny Toca Life: School izao
Sago Mini Forest Flyer maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra
Ny lalao ho an'ny ankizy kely ao an-trano izay asehonay anao anio dia ny Sago Mini Forest Flyer, lalao iray izay hiarahan'ny zanakay kely miaraka amin'ny vavany vaovao sy ny volom-borona namany.
10k Runner maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra
Tonga izao ny fararano, tsy maintsy manomboka jerena raha io kibo maniry ho an'ny ...
Ny fampiharana iDisplay izay ahafahantsika manitatra ny birao an'ny Mac na PC dia amin'ny antsasaky ny vidiny mahazatra: 9,99 euro
Alto's Adventure, iray amin'ireo lalao voalohany manohana ny motera haptika vaovao an'ny iPhone 7
Ny iPhone 7 sy ny iPhone 7 Plus dia tonga niaraka tamin'ny motera haptic mahery vaika matanjaka kokoa. Alto's Adventure dia iray amin'ireo lalao voalohany nanampy fanampiana.
Mandeha, ny fampiharana amin'ny herinandro hanampy antsika hiala sasatra
Manana olana amin'ny fialan-tsasatra ve ianao rehefa avy miasa? Amin'ity indray mitoraka ity, ny fampiharana ny herinandro dia mikoriana ary mikendry ny hanampy antsika hiala sasatra
WiFox, fampiharana hifehy ny WiFis seranam-piaramanidina rehetra
WiFox dia rindrambaiko tena ilaina ho an'ny mpandeha izay mamela antsika hifandray amin'ireo tambajotra WiFi misy seranam-piaramanidina erak'izao tontolo izao
Skype dia nohavaozina miaraka amin'ny fanohanan'ny Siri sy CallKit an'ny iOS 10 vaovao
Ny fiantsoana amin'ny alàlan'ny Skype dia ho mora kokoa izao noho ny fanavaozana vaovao ho an'ny iOS izay mampiditra ny fanohanana an'i SiriKit sy CallKit.
Twitter Moments dia efa misy eran'izao tontolo izao
Ny fampisehoana vaovao faha-XNUMX an'ny Twitter, Moments dia efa misy manerantany ho an'ny mpampiasa hamorona ny fotoanany
Manomboka ny seho: havaozina ny ProCam 4 ary manampy ny mety hakana sary 3D amin'ny iPhone 7 Plus
Resaka fotoana io: efa misy ny fampiharana ahafahanao maka sary 3D miaraka amin'ny iPhone 7 Plus, ProCam 4. Nanomboka ny seho.
Google dia manavao ny fampiharana ampiany amin'ny fomba fanamoriana sy famerenana amin'ny laoniny horonantsary YouTube
Google dia vao avy nanavao ny fampiharana azy amin'ny alàlan'ny fampidirana maodely incognito ahafahantsika mivezivezy tsy mitahiry data momba izay tadiavintsika.
Noteren'i Aleman WhatsApp hijanona ny fanangonana angona momba ny mpampiasa
Alemana no firenena voalohany naneho hevitra momba ny fepetra vaovao apetraky ny WhatsApp mba hanohizana ny fampiasana azy.
YouTube Go dia hamela anay hampihena ny fanjifana ny tahan'ny tahirin-kevitra
YouTube Go no rindranasa vaovao novolavolain'i Google hanombohana any amin'ireo firenena misandratra, izay laharam-pahamehana ny fampiasana data
MediaTrans, safidy hafa amin'ny iTunes intuitive and functional
Inona? Tsy tianao koa ny iTunes hitantanana ny atin'ny iPhone-nao? Eny, MediaTrans dia safidy tsara sy matanjaka be amin'ny fampiasa maro.
WhatsApp dia nohavaozina ary tsy milaza vaovao vaovao
Nohavaozina indray ny WhatsApp, saingy nahavita izay tiany indrindra izy: lazao ao amin'ny lisitry ny vaovao zavatra azontsika ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra.
Ahoana ny fakana sary amin'ny endrika RAW amin'ny iPhone na iPad ao amin'ny iOS 10
Na dia tsy navelan'ny iOS 10 haka sary an-tsehatra amin'ny endrika RAW aza izahay dia afaka mampiasa ny fampiharana avy amin'ny antoko fahatelo hanamboarana azy ireo ho fanampin'ny fanovana azy
Vao iray volana lasa izay dia nitatitra ny fampahalalam-baovao rehetra fa manavao ny voambolana ny WhatsApp ...
Flying Slime dia lalao 2D mahaliana izay manolotra antsika fomba filalaovana hafa noho ny mahazatra antsika amin'ity karazana lalao ity.
Yxplayer, mpilalao horonantsary, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Yxplayer dia mpilalao horonantsary sy sary izay ahafahantsika mijery karazana rakitra atolotra amin'ny Dropbox, Google Drive na Box.
Skype for iPad dia efa mamela antsika hanao antso amin'ny alàlan'ny Siri
Ny fanavaozana an'i Siri farany ho an'ny iPad dia efa mamela antsika hanao antso amin'ny alàlan'ny Siri, iray amin'ireo zava-baovao ao amin'ny iOS 10
Nohavaozina ny telegram amin'ny alàlan'ny fanitsiana mpamoaka horonan-tsary sy sary ahafahanay manampy sticker, sarontava ary lahatsoratra
Ireo bandy ao amin'ny Telegram dia namoaka vaovao farany Telegram nanampy mpamoaka sary sy mpanao GIF vaovao
Tanana tsy hita maso, tetik'asa manaraka an'ny Apple hifehy ny iPhone
Ny fampandrosoana an'i Siri dia hiafara amin'ny tetikasa Invisible Hand izay ahafahantsika mifehy tanteraka ny iPhone amin'ny feontsika
Ny fanavaozana Pokémon GO dia tonga miaraka amin'ny vaovao kely
Pokémon GO dia nanisy fampiasa iray ahafahantsika mahalala ny toerana izay ahaizantsika Pokémon ao anaty rakitra azy manokana.
Tao anatin'ny 9 andro, fangatahana 1.650 no tonga tao amin'ny App Store, 75% amin'izy ireo dia sticker
Tao anatin'ny 9 andro farany, hatramin'ny nanombohana ny iOS 10 dia nahatratra 1.650 ny fampiharana tonga tany amin'ny App Store, 75% amin'izy ireo dia mifanaraka amin'ny rindranasan'ny Messages
Fetiben'ny robot Sago Mini, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ho an'ireo ankizy kely ao an-trano mba hampiala voly ny tenany amin'ity faran'ny herinandro ity dia asehonay aminao ny Sago Mini Robot Party, fampiharana ho an'ny ankizy hatramin'ny dimy taona.
NBA 2K17 dia azo alaina ao amin'ny App Store
Ny lalao NBA 2K17, miorina amin'ny NBA, dia azo alaina ao amin'ny App Store ankehitriny, lalao iray izay manaraka ny filozofia mitovy amin'ireo kinova taloha
Colours Match maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny lalao azo alaina maimaim-poana dia ny Colors Match, lalao ho an'ireo ankizy kely ao an-trano izay hanampy azy ireo hamantatra loko
Batman the Telltale Series dia mamely ny App Store
Ny zazalahin'ny The Telltale dia miverina miaraka amin'ny sary an-tsary hafa, Batman The Telltale Series, dia hanitrika antsika amin'ny fiainana roa heny an'ny maherifo DC Comics.
VLC Streamer maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra
Ny fampiharana hilalao horonantsary avy amin'ny PC na Mac antsika, VLC Streamer dia azo alaina maimaimpoana maimaimpoana tanteraka.
AG Drive - iray amin'ireo lalao hazakazaka tsara indrindra ho fampiharana mandritra ny herinandro
Raha tianao ny lalao hazakazaka dia liana ianao amin'ny fanararaotana ny tolotra ankehitriny: lasa maimaimpoana nandritra ny fotoana voafetra ny AG Drive. Araraoty!
Fintonic, ny fampiharana mamela anao hifehy ny kaontinao dia havaozina
Te hanana fifehezana tanteraka ny hetsiky ny kaontinao any amin'ny banky ianao? Afaka manampy anao ny Fintonic, miaraka amin'ny fampandrenesana sy karazana fampahalalana rehetra.
Ny fampiharana kalandrie Fantastical dia havaozina manararaotra ireo fiasa vaovao amin'ny iOS 10 sy watchOS 3
Fantastical, iray amin'ireo fampiharana kalandrie tsara indrindra ho an'ny iPhone sy iPad vao nohavaozina nanampy ny fiasa vaovao an'ny iOS 10 sy watchOS 3
Manahy momba ny iPhone manjelanjelatrao 7 manjavona ianao? Ity tranga Spigen ity dia mety aminao
Mitady tranga tsara ho an'ny iPhone 7-nao? Spigen, toy ny mahazatra, dia efa manana ny tsara indrindra misy, toa an'io mainty io ho an'ny iPhone 7 Jet Black.
Mitandrema: Allo, ny fampiharana fandefasan-kafatra vaovao an'ny Google, tonga miaraka amin'ny safidy miafina
Tsy afaka milaza izahay fa manaitra anay izany: Allo, ilay fampiharana fandefasan-kafatra vaovao avy amin'i Google, dia "hitsikilo" antsika amin'ny alàlan'ny toerana misy azy raha tsy sorohintsika izany.
Ny sehatra fandefasan-kafatra vaovao an'ny Google, Allo, dia tonga amin'ny iOS
Google dia nanangana ny Google Allo amin'ny iOS sy Android, na dia voafetra ara-jeografika aza ny fampidinana azy amin'izao fotoana izao.
Maimaim-poana 3D Anatomy mandritra ny fotoana voafetra
Ny fampiharana izay asehonay aminao anio mba ampidininao maimaim-poana dia ny 3D Anatomy, fampiharana iray ahafahantsika mandinika ny atin'ny hoditr'olombelona manontolo.
Manatsara ny safidy i Google hizarana sy hamoronana horonan-tsary ao amin'ny Google Photos
Google dia nanavao ny fampiharana Google Photos indray, manatsara ny safidy amin'ny fizarana sary voatahiry ho fanatsarana ny famoronana horonan-tsary.
Sary, horonan-tsary, rohy ary GIF dia tsy mampihena intsony ny litera amin'ny tweets
Vao nanambara ny tambajotra sosialy bilaogy bitika fa ny sary, horonan-tsary, ny fitsapan-kevitra, ny rohy ary ny GIF dia tsy hampihena ny tarehintsoratra amin'ny sioka
Araho maso izay mitranga ao amin'ny solosaintsika amin'ny Watchover, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny fampiharana Watchover dia ahafahantsika manara-maso mandrakariva ireo rindranasa izay mandeha amin'ny PC na Mac amin'ny alàlan'ny iPhone na iPad
Periscope dia manatsara ny fanohanan'ny teratany ho an'ny iPad ary manampy sticker ho an'ny fampiharana Messages
Ny rindranasan'ny mpilalao horonantsary streaming, Periscope dia nohavaozina manolotra fanampiana ho an'ny sticker amin'ny app Messages
Chrome dia nohavaozina amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny sasany amin'ireo asany
Google dia tsy naka firy hanatsarana ny fampiharana Chrome ho an'ny iOS, manararaotra azy hanatsara ny fiasan'ny sasany amin'ireo asany
Farm Animals Puzzle dia lalao piozila izay, araky ny anarany dia entanin'ny fambolena iray.
Space Marshals 2, lasa tsara kokoa ny tsara
Space Marshals 2 dia tonga ao amin'ny App Store hanohy ny fahombiazan'ny ampahany voalohany, miaraka amin'ny safidy bebe kokoa izay manatsara ny traikefa amin'ny lalao.
Shrek sy ny namana, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Shrek sy ny namany no lalao vaovao ho an'ny ankizy kely ao an-trano izay afaka alaina maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra mandritra ny fotoana voafetra
Andriambavy angano mba handokoana, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny andriambavilanitra angano dia lalao ho an'ny kely indrindra amin'ny trano izay tsy maintsy fandokoan'izy ireo loko ireo takelaka samihafa mandrafitra ny tantara
NBA 2K17 dia efa eo amintsika, ary ny fampiharana ofisialy koa
Toy ny isan-taona, ny mpankafy ny fanatanjahantena canasta dia miandry toy ny rano Mey amin'ny fivoahan'ny NBA ...
Oz: Broken Kingdom, lalao natolotry ny keynote an'ny iPhone 7, tonga tao amin'ny App Store
Oz: Broken Kingdom, ilay lalao mahafinaritra natolotr'i Apple tamin'ny lahateny fototra izay nanolorany ny iPhone 7 koa dia tonga tao amin'ny App Store.
Super Phantom Cat no fampiharana maimaim-poana mandritra ny herinandro
Ny lalao nofidian'i Apple ho lalao amin'ny herinandro dia ny Super Phantom Cat, lalao sehatra Mario sy Sonic, ny kilalao avy amin'ny Nintendo sy Sega
CloudMagic dia antsoina hoe Newton ankehitriny ary mitondra fiasa premium vaovao
CloudMagic dia antsoina hoe Newton ary ny fampiharana vaovao dia tsy vitan'ny hoe manova ny anarany fotsiny fa mitondra fiasa vaovao amin'ny mailakao
Fanavaozana ny tohiny Scanner Pro, Spark ary PDF Expert manararaotra ireo fiasa vaovao amin'ny iOS 10
Ny developer Readdle dia nanavao ny rindranasa fampiasa indrindra azy Scanner Pro, Spark ary PDF Expert manararaotra ny zava-baovao ao amin'ny iOS 10
iWork dia havaozina amin'ny alàlan'ny fampidirana fiasa miaraka amin'ny fiaraha-miasa vaovao
Ny iray amin'ireo zava-baovao natolotr'i Apple tamin'ny 7 septambra, dia mifandraika amin'ny fiarahamiasa iWork ao amin'ny iOS, fiasa iray izay efa misy
Big Action Mega Fight maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra
Rehefa afaka ny tafiotra dia tonga ny fitoniana. Taorian'ny andro be asa izay omaly tamin'ny fanombohana ...
Pokémon Go dia havaozina mamela antsika hisafidy Pokémon mpiara-miasa
Niantic dia mankatoa ary manampy ny safidy amin'ny Pokémon Go an'ny mpiara-miombon'antoka Pokémon, na Pokémon Buddy, mba hahafahantsika mankafy ny dia ataontsika miaraka amin'ny mpiara-miasa.
Todoist, novaina manararaotra ny vaovaon'ny iOS 10
Ny mpitantana ny laharam-pahamehana Todoist dia navaozina vao nanararaotra ireo fiasa vaovao avelan'ny Apple mpamorona amin'ny iOS 10
Nohavaozina ny WhatsApp ary afaka mandefa hafatra amin'ny alàlan'i Siri izahay izao
WhatsApp dia manohy ny tahan'ny fanavaozam-baovao. Fotoana fohy taorian'ny fanombohana ny iOS 10 dia novaina ary efa manohana an'i Siri.
Google Cardboard, ny fampiharana virtual reality dia natomboka ho an'ny iPhone
Google Cardboard dia mamela ny mpampiasa haka sary 3D, indrindra ny panoramas, ary avy eo hizara azy ireo amin'ny namana. Hita amin'ny App Store izy io.
Pokémon GO dia hijanona tsy hiasa amin'ny fitaovana jailbroken
Manana iPhone jailbroken ve ianao ary tianao Pokémon? Mitandrema amin'ny fanavaozana Pokémon GO farany, tsy hiasa ho anao intsony izy io.
Ahoana ny fandefasana GIF ao amin'ny app Messages ao amin'ny iOS 10
IOS 10 dia efa havoaka, atorinay anao ny fomba fandefasana GIF haingana amin'ny alàlan'ny fampiharana hafatra havaozina ao amin'ny rafitra fiasa Apple vaovao.
Mandoko miaraka amin'i Peppa Pig sy George miaraka amin'ity rindrambaiko maimaimpoana ity ho an'ireo ankizy kely
Ny fampiharana izay asehonay anao anio dia lalao Peppa Pig maimaim-poana ho an'ny ankizy kely mba hananana loko mahafinaritra miaraka amin'i Peppa sy i George
Runtastic Push Ups Pro, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Runtastic Push ups pro dia manampy antsika hiditra amin'ny tontolon'ny mistery push push amin'ny alàlan'ity fampiharana ity izay maimaimpoana ny misintona mandritra ny fotoana voafetra
Jereo ny fianan'ny ala amin'ity fampiharana maimaimpoana ity mandritra ny fotoana voafetra
Ao amin'ny App Store dia afaka mahita fampiharana be dia be ho an'ny kely indrindra amin'ny trano isika, ary avy amin'ny ...
Jigsaw Wonder Kittens Puzzles for Kids maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra
Jigsaw Wonder Sitters Puzzles dia lalao piozila ho an'ny ankizy kely ao an-trano izay misy fotoana voafetra azo alaina maimaim-poana
Afaka milalao Super Mario amin'ny iPhone miaraka amin'ity kopia saika mitovy ity ianao izao
Iray amin'ireo zava-baovao lehibe natolotray antsika tamin'ny teny fototra tamin'ny 7 septambra, ho fanampin'ny iPhone 7, ny ...
Tonga amin'ny kinova 2.0 ny Google Photos miaraka amina vaovao manandanja
Ny serivisy fitehirizana sary sy sary Google Photos dia nohavaozina ary nanampy fanohanana ny Live Photos
Tsy nampoizina ny Facebook tamin'ny fanehoan-kevitra nentanin'ny Star Trek tamin'ny faha-50 taonany
Ireo mpankafy Star Trek dia afaka mankafy fanehoan-kevitra manokana miaraka amin'ireo singa ao amin'ilay sarimihetsika mandritra ny fotoana voafetra.
Te hisintona ny Super Mario Run marina ve ianao raha misy izany? Afaka mampandre anao ny App Store
Mahatsiaro ho milalao Super Mario Run ve ianao? Tokony ho fantatrao fa ny App Store dia namela bokotra hampandre anao rehefa tonga ny fotoana.
Blek azo alaina maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny lalao maimaim-poana asehonay anao anio dia ny Blek, lalao mahaliana izay tsy maintsy ampiasanay ny fahaizantsika miasa
iPhocus - Camcorder manual, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny rindranasa asehonay anao anio ho ampidininao maimaimpoana dia iPhocus - Camcorder Manual, fampiharana ahafahantsika mifehy ny fikirana tanana rehefa manoratra
Apple dia manolotra ny AirPods, headphone marani-tsaina tsara kokoa noho ny nantenainay
Ofisialy izao. Apple dia nanolotra ny AirPods, headphone tsy misy tariby izay tsara lavitra noho ny nantenainay.
Miaraka amin'ny famoahana ny lalao vaovao avy amin'ny developer Sago Sago, ny lalao Baby Dress Up dia maimaimpoana tanteraka alaina.
RadarGo no hany radar Pokémon Go hitanay
Izahay dia efa nisedra ny RadarGo nandritra ny herinandro maro ary ny tena zava-misy dia io no hany Pokémon Go Radar hitantsika tao amin'ny App Store
Ho avy - Kalandrie ny hetsika amin'ny ora rehetra maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny ho avy - Ny tetiandro amin'ny hetsika amin'ny ora rehetra dia manome fomba vaovao hahitana haingana ireo fanendrena ao amin'ny kalandrie.
Snapchat vs. Tantara Instagram: iray volana taty aoriana
Iray volana aorian'ny nanombohan'ny Instagram Stories dia fotoana tokony hijerena izay fantatsika sy ny fomba fampiasantsika ny tsirairay. Amin'ny lafiny iza avy ianao?
Ampifanaraho amin'ny tavy 2, lalao iray izay hampihena ny lanjany no ho vinavina lehibe indrindra
Fit The Fat 2, lalao iray manitikitika ny saina, izay ny tena tanjony dia ny hahatonga ny lehilahy matavy hihena. Mamono fotoana miaraka amin'ity lalao mampiala voly ity.
Mandehana miaraka amin'ny Pokémon tianao amin'ny Pokémon Go vaovao
Ireo tovolahy avy any Niantic dia nanambara ny fahatongavan'i Pokémon namana, Buddy Pokémon, ho any Pokémon Go mba hahafahantsika mandeha miaraka amin'ny Pokémon anay.
Tantano ny router ASUS fenoo avy amin'ny iPhone miaraka amin'ny fampiharana ofisialy
Ny fampiharana ASUS ofisialy dia mamela anao hitantana ny lafiny rehetra amin'ny router amin'ny fomba mahasalama sy haingana avy amin'ny efijery an'ny iPhone
Noodles!, Manatevin-daharana ny lohan'ilay herinandro
Te hanana lalao mety hahatonga anao hieritreritra saika ireo ambaratonga voalohany ve ianao? Avy eo araraoty ny fanolorana ny fampiharana ny herinandro ary sintomy ny Noodles!
ACDSee Pro maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
ACDSee Pro, iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra haka sary ary hanitsy azy ireo avy eo, dia azo alaina maimaimpoana.
Facebook Messenger izao dia mampiditra horonantsary eo noho eo
Amin'ny dingana iray hafa mankany amin'ny fampidirana feno ny endrika horonantsary, ny Facebook dia nandefa kinova vaovao ...
Snapseed dia nohavaozina manolotra fanohanana ireo rakitra RAW
Ny fanavaozana farany ny mpamoaka sary an'i Google, Snapseed, dia manome anay fanampiana ho an'ireo fisie amin'ny endrika RAW avy amin'ny maodelin'ny fakantsary 144
Ny fitsapana voalohany amin'ny fampidirana Siri amin'ny fampiharana an'ny antoko fahatelo dia tsy diso fanantenana
Apple dia namela ny olona sasany hanandrana ny fampidirana an'i Siri amin'ireo fampiharana antoko fahatelo ary toa ho tsara kokoa noho ny nandrasana izany.
Companion, fampiharana izay tsy handehananao irery eny an-dalana mihitsy
Ny Companion dia fampiharana ho an'ny iOS sy Android izay mamela ireo voafidinao hiaraka aminao mandritra ny dianao noho ny findainao finday avo lenta
Olana ho an'ny mpampiasa maro amin'ny App Store ho an'ny iOS, Mac ary tvOS
Ny fivarotana app macOS, tvOS ary iOS dia voan'ny olana sasany izay nanakana ny fidirana amin'izy ireo mandritra ny adiny roa.
Rocket VPN, zahao ny tranonkala nefa aza mitatitra izay ataonao
Te-hijery sy hitazona ny anaranao tsy miova miaraka ve ianao? Ny fampiharana Rocket VPN dia safidy tsara miaraka amin'ny vidin'ny fifaninanana.
LIMBO, misy ao amin'ny App Store miaraka amina fihenam-bidy lehibe
Ampahafantarinay anao indray ny lalao mahafinaritra iray izay misy mandritra ny fotoana voafetra misy fihenam-bidy lehibe. LIMBO…
Twitter dia miasa amin'ny fitaovana fanoherana ny herisetra miaraka amin'ny fanakanana teny lakile
Twitter dia handefa fisehoan-javatra antonony vaovao ahafahan'ny mpampiasa manivana ny atiny hitany amin'ny fampiasana teny lakile.
Windy, fampiharana mahafinaritra raha liana amin'ny rivotra ianao
Miaraka amin'ny Windy dia azonao atao ny mahafantatra ny hamafin'ny rivotra sy ny lalan'ny rivotra, na amin'ny fotoana fohy na lavitra, amin'ny efijery an'ny iPhone-nao.
Manomboka mangataka amin'ireo mpampiasa taloha ny Dropbox hanova ny teny miafiny
Dropbox dia mangataka amin'ireo mpampiasa efa nanompo nanomboka ny taona 2012 hanova ny teny miafin'izy ireo raha toa ka tsy nanova izany hatrizay.
WordPress dia nohavaozina amin'ny endrika vaovao maro
Ny fanavaozana farany ny Wordpress dia manome antsika fanatsarana vaovao sy manan-danja amin'ny asa sy ny fahombiazan'ny fampiharana amin'ny iPhone sy iPad
Maimaimpoana VPN Master Pro mandritra ny fotoana voafetra
Ny fampiharana VPN Master Pro dia mamela antsika hampiasa IP hafa hahafahana mizaha pejy Internet na mampiasa serivisy voafetra ara-jeografika.
Pokémon GO dia navaozina tamin'ny fampidirana ny fiofanana vaovao ary mampanantena vaovao manan-danja
Pokémon GO dia nohavaozina tamin'ny fanatsarana fanatsarana, fa ny tena zava-dehibe dia ny fampanantenanao fa hisy vaovao amin'ny ho avy.
Microsoft hanangana Cache, fitantanana tabilao
Microsoft dia manamboatra ny tontolon'ny fampiharana finday indray ary amin'ity indray mitoraka ity dia mivoaka amin'ny ...
Telstra any Aostralia dia mamela anao hampiasa Apple Music nefa tsy hihena ny angona findainao
Telstra, mpandraharaha finday aostralianina, dia mamela ny Apple Music hilalao nefa tsy mampiasa ny tambin-karama isam-bolana.
Nohavaozina ny app Google manampy fanampiana bebe kokoa amin'ny teknolojia 3D Touch
Ny rindranasa Google ho an'ny iOS dia nohavaozina nanampy fiasa vaovao mifanaraka amin'ny haitao 3D Touch hanamorana ny fikarohana
Ity no fomba hahazoam-bola Facebook amin'ny WhatsApp: fivarotana ny data-nao
WhatsApp dia manavao ny Terms of Service voalohany indrindra ao anatin'ny efa-taona, mamela ny varavarana misokatra ho an'ireo orinasa hampiasa ny angon-tsainay
MindNode maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra ho fampiharana amin'ny herinandro
Ny fampiharana maimaim-poana asehonay anao anio ao amin'ny MindNode, fampiharana iray izay hanampy anay hitantana ny sarintany metaly anay
Prisma dia mamela anao manampy ny sivana malaza kanto ivelan'ny Internet
Ny rindrambaiko sivana lamaody, Prisma, dia havaozina hahafahantsika mampihatra ny sivana ivelan'ny Internet ary manadino ny rahona mahakivy.
Azo alaina ao amin'ny App Store Space Marshals 2 izao
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia nanolotra ny fampiharana ny herinandro ny lalao mahafinaritra Space Marshals i Apple, lalao iray izay ...
Pinterest mividy serivisy Instapaper vakiana avy eo
Taorian'ny tsaho efa amam-bolana maro, farany vao nanambara ny fividianana ny serivisy vakiana Instapaper ny tambajotra sosialy Picterest
Taratasy avy any andrefana 2 maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra
Ny lalao maimaim-poana atolotray anao anio dia ny Letters from Nowhere 2, lalao miafina iray hafa avy amin'ny developer G5 Entertainment, izay 4,99 euro ny vidiny
Google manatsara ny sehatrasa Street View mba hanadinoantsika ny fampiharana
Hadinoy ny fampiharana Google Street View noho ny fanatsarana nataon'i Google ny tranokala Google Street View web.
Fitsapana Facebook amin'ny alàlan'ny playback audio mandeha ho azy amin'ny horonan-tsary
Nanamafy tamin'ny fomba ofisialy an'i Mashable ny Facebook fa manandrana amin'ny rindranasa finday iOS sy Android izy io. Momba ny…
Ny fitsangatsanganana rehetra any Espana amin'ny iPhone miaraka amin'ny fampiharana ofisialy
Ny Tour of Spain dia efa mandeha mamakivaky ny Saikinosy Iberia ary manana fotoana hanarahana azy amin'ny fampiharana ofisialy ianao
Izay rehetra miakatra, tsy maintsy hidina: manomboka mihidy ny Pokémon GO
Raha ny fahitana azy, vitsy ny mpampiasa no manohy milalao Pokémon GO. Tapitra ve ny fahombiazan'ny lalao mega-malaza?
Hianatra ny fomba fanonona an'i Barbra Streisand i Siri amin'ny 30 septambra
Rehefa nibaboka i Tim Cook dia hianatra hanonona an'i Barbra Streisand i Siri afaka iray volana eo ho eo, amin'ny fanavaozana ho avy.
Nandefa ny Lifestage ny Facebook mba hamehezana ny hafanam-po Snapchat
Ireo tovolahy ao amin'ny Facebook dia mandefa ny iOS app Lifestage mba hifaninana mivantana amin'ny tambajotra sosialy Snapchat.
Kitapo Pro maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny mpamaky antontan-taratasy Bcasecase Pro dia ahafahantsika mamaky karazana rakitra amin'ny iPhone, iPad ary iPod touch aminay ary amin'ny fotoana voafetra dia azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana.